Ny fizahan-tany any Puerto Rico dia miaro ny fahasalaman'ny mpitsidika sy ny fiarovana azy ireo
Home » Toerana fitsangatsanganana » Ny fizahan-tany any Puerto Rico dia miaro ny fahasalaman'ny mpitsidika sy ny fiarovana azy ireo
Mahafantatra ny filàna fenitra vaovao amin'ny fanadiovana, famonoana otrikaretina, fahadiovana ary ny tombony amin'ny fifaninanana izay omen'ny fampiharana fepetra fanampiny ho an'ny Nosy ho toeram-pizahan-tany, ny Orinasa fizahantany any Puerto Rico (PRTC) nanambara androany ny famoronana programa hanome tombo-kase volamena manamarina kintana ho an'ireo orinasa mifandraika amin'ny fizahan-tany. Ity fanamarinana (na badge) ity dia homena an'ireo izay mampihatra ny fepetra avo indrindra momba ny fahasalamana sy ny fiarovana. Ny programa dia novolavolaina tamin'ny alàlan'ny fenitra henjana indrindra, ny tranga fanao tsara indrindra dia natao ho referansa, ary koa torolàlana sy tolo-kevitra avy amin'ireo masoivoho sy fikambanana manampahaizana manokana momba izany.
Ny tanjon'ny programa dia ny fanandratana An'i Puerto Rico indostrian'ny fizahantany ary apetraka ho toy ny fenitra volamena vaovao amin'ny fahasalamana sy ny fiarovana ny toerana itodiana. Ny PRTC dia mikendry ny hampitombo ny fahatokisan'ny mpanjifa an'i Puerto Rico ho toy ny toeran-kaleha voaomana ary efa niova tamin'ny toe-javatra ankehitriny. Manomboka amin'ny manaraka ny famoahana ilay programa Alatsinainy, May 4th. Amin'ny fotoana hisokafan'ny varotra fizahan-tany sy ny toerana hitsenana ireo mpitsidika indray dia antenaina fa ny ankamaroan'ny orinasa mifandraika amin'ny fizahan-tany dia hampihatra ireo fepetra ireo ary hiaro ny filaminan'ny tsirairay.
Ny rafitra haavo roa dia natao nifototra tamin'ny torolàlana hisorohana ny fiparitahan'ny Covid-19 napetraky ny Centre for Disease Control (CDC), World Health Organization, ny tatitra OSHA 3990, ny torolàlana momba ny fahasalamana any Puerto Rico, Governora Wanda Vazquez Garced's baiko mpanatanteraka, ary programa kaliberaly avo lenta toa ny Singapore Tombo-kase momba ny fiarovana sy ny fikambanan'ny trano fisakafoanana nasionaly. Ny ambaratonga voalohany dia torolàlana momba ny fahasalamana sy fiarovana amin'ny fizahantany, torolàlana azo ampiharina miaraka amin'ny fepetra tsy maintsy atao mba hiarovana ny fahasalaman'ny mpiasa, ny mpitsidika ary ny mpiaro eo an-toerana. Ny faharoa dia ny Tombo-kase momba ny fahasalamana sy fiarovana; programa fanamarinana ho an'ny orinasam-pizahantany fizahan-tany voamarina rehetra izay mihaona na nihoatra ny fampiharana sy ny fampiharana hatrany ireo fepetra napetraka.
“Ireto torolàlana miasa ireto sy ny programa fanamarinana dia zava-dehibe amin'ny famohana indray ny sehatry ny fizahan-tany sy fizahan-tany ao Puerto Rico ary anton-javatra lehibe hametraka antsika amin'ny toerana tena mifaninana raha vao misokatra ny tsenan'ny fizahan-tany sy fizahan-tany. Rehefa manao drafitra fitsangatsanganana izy ireo, ny mpanjifa dia handinika ireo toerana namboarina tsara omena azy ireo hanomezana azy ireo fepetra sy loharano ilaina hiarovana ny fahasalamany. Ny fandraisana anjara miaraka amin'ny fampiharana azy, na orinasa na mpanjifa, dia ho fanalahidy amin'ny fampiharana ireo fahazarana ilaina manokana sy fampiharana ny andraikitra ara-tsosialy. Ity no fomba tsara indrindra hanolorana ny besinimaro sy ny mpizahatany ny fenitra fiarovana sy fahadiovana antenaina sy mendrika azy ireo, "hoy ny talen'ny fahefana misahana ny Orinasa fizahantany Puerto Rico, Carla Campos.
Ity torolàlana ity dia misy ny fepetra toy ny: fananganana toeram-pisavana fizahana fahasalamana ho an'ny mpiasa sy ny vahiny, ny fizotran'ny fizahana vaovao ary ny famitana ny Form of Declaration and Contact Tracing Form, ny lalana azo antoka sy ny fandavana ny lafiny sosialy isaky ny karazana orinasa sy hetsika; fameperana sy fepetra ara-pahasalamana fanampiny ho an'ny rafi-pisakafoan-tena: fampitomboana fanadiovana sy famonoana otrikaretina; torolàlana momba ny gara fanadiovana tanana; ary fiofanana momba ny fampiasana PPE - Fitaovana Fiarovana manokana.
Ireo fenitra vaovao momba ny fahadiovana dia hampiharina amin'ny orinasa fizahan-tany rehetra manerana ny nosy, anisan'izany ny hotely, trano fandraisam-bahiny, paradores, posadas, trano fatoriana sy trano fandraisam-bahiny, trano fandraisam-bahiny kely, trano fandraisam-bahiny, fananana zarazaraina fotoana, fanofana tsy maharitra, trano filokana, mpandraharaha fizahan-tany, fitaterana fizahan-tany, fitantanana traikefa, trano fisakafoanana, fisotroana, toeram-pandihizana ary fisarihana.